«Nitranga ny nafenina »
06/12/2018 admintriatra 0
Voavaly ny fanontaniana napetraky ny namana mpanao gazety teto amin’ny TRIATRA nanao hoe : « Iza loatra re izao mpanao politika mitady vola mafy amin’ny vanim-potoana akaiky fifidianana izao e ? » Nirongatra izay tsy …Tohiny
Ny ràn’ireo vahoaka madinika sy zanaka ambany tanàna, maty natao sorona teny Ambohitsorohitra ny faha-7 febroary 2009 no naha miliardera an’i Andry Rajoelina, loharanon-karenan’i Mamy Ravatomanga. Inona no mba sitraka azon’ireo zanaka ambany tanàna, nanana …Tohiny
Fanaovana politika maloto : Tratra ny nafenin’i Dadafara
Izay manome betsaka sy manome tambiny ihany no tohanan’i dadafara , na Joseph Martin Andriamampionona, izay izy vao manohana kandidà amin’ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa. Mazava tsara mantsy ny nambarany tamin’i Marc Ravalomanana nandritra ny …Tohiny
Raharaha Antanimena : Lehilahy iray mbola karohina
Mihazakazaka ny raharaha mahakasika ilay fikasihan-tanana mpisolovava teny Antanimena, ny marainan’ny sabotsy 1 desambra lasa teo. Efa vita ny fanadihadiana mahakasika izany, ka lehilahy roa aloha izao no niaiky ny helony teny amin’ny sampana fikarohana …Tohiny
Fantatra avokoa ireo olana izay sedrain’ny faritra tsirairay hoy ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina, na eo amin’ny lafin’ny fahasalamana izany, fampianarana, ny tsy fandriam-pahalemana, ary ny fahasahiranana, ny fiainana any ambanivohitra hoy ny Filoha nandritra ny ...Tohiny